Maxay yihiin sadexda Arimood uu Madaxweyne Farmaajo kula heshiiyay RW Khayre | Arlaadi
Home Blog Maxay yihiin sadexda Arimood uu Madaxweyne Farmaajo kula heshiiyay RW Khayre
Maxay yihiin sadexda Arimood uu Madaxweyne Farmaajo kula heshiiyay RW Khayre
“Mabda’ Aan ku shaqeeyno ayaa Soomaalinimo ah” Madaxweyne Farmaajo “dalkeenu wuxuu la buruburay oo colaadaha iyo dhibaatooyinka inoo haystaan waa Caddaalad daro, aniga ayaa ugu horeeya qabiil malihi dadkeyguna waa ii simanyihiin oo waxaan ugu shaqeeyn si Caddaalad ah.”
Waa Erayo ka mid ahaa Khudbadii Madaxweyne Farmaajo uu u Jeediyay Reer Nairobi
March 25, 2017| Wuxuu Madaxweyne FARMAAJO dadkii dhageysanaayey faray inay siyaasiyiinta la xisaabtamaan wuxuu yiri “qofka aad ganacsi la gasho haduu ku khiyaano mar kale ma Aaminaysid. Waxaa la iska rabaa sidoo kale Siyaasigii mar idin khiyaano inaydaan mar kale Aaminin. Madaxweyne Farmaajo ayaa goobta ka sheegay in isaga iyo RW Khayre ay balan ku galeen sadex arimoo oo kala ah:
1- In Musuq-maasuqa laga fogaado. 2- In ay wada shaqeeyaan oo khilaafaadka la iska ilaaliyo. 3- In dadk iyo dalka si daacadnimo ah ay ugu wada adegaan. Madaxweyne Farmaajo wuxuu kalo sheegay in uusan lahayn qabiil balse uu yahay Soomaali sidoo kalena uu kula taliyay Ra’iisul wasaaraha wasiiradana ay ka filayaan. Ugu danbeyntii Madaxweyne Farmaajo wuxuu balan qaaday Wasiirkii shaqadiisa gudan waayo in xil ka qaadis lagu sameyn doono. Halkaan ka daawo Madaxweyne Farmaajo oo khudbad qiimo leh jeediyay.